June 23, 2018 – Gasy Egypte
“Manomboka mitrandraka sy mikarakara izay misy eo am-pelatanany ny firenentsika ho fampandrosoana. Tena tsara ilay hevitra ary hita fa misy vokatra azo tsapain-tànana sy inoana fa haharitra saingy mbola mitaky ezaka goavana.” Tokanana anio 23 jona 2018 ny toerana famatsiana herin’aratra azo avy amin’ny masoandro antsoina hoe “central solaire photovoltaïque d’Ihazolava” izay any Ambatolamapy no misy azy. Hanampy amin’ny famatsiana herin’aratra izay sahanin’ny orinasa JIRAMA moa izy ity. Tena nampitaraina ny maro ny fahatapahan’ny jiro matetika noho ity farany ka antenaina hitondra fanovana ny fisian’ity famatsiana vaovao ity. Tsy vao…
Accueil, Activites et Divers, Les Chroniques de Mihaja, Les incontournables, Politique, Vaovao12 Comments